Maalinta: Febraayo 15, 2018
The Republic of Turkey State Tareennada KPSS 2017 / 2 sida la dhawaaqay khuseeya waxaa la daabacay ka dib markii lagu dhawaaqay natiijada door bidayo. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in liiska mar labaad la cusbooneysiiyay oo magacyo cusub lagu soo daray liiska. TCDD [More ...]
Ilk Maalinta ugu horeysa ee kulanka Ururka Caalamiga ah ee Gawaarida Caalamiga ah ee Gawaarida Caalamiga ah ee Gawaarida 15 - 16 waxaa lagu qabanayaa hoteelka Grand Ankara bisha Febraayo 2018. Veysi Kurt, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. [More ...]
Ku rakibida nidaamka smart stop iyo kaararka otomatiga ah (Kiosk) oo ay sameeyeen Degmooyinka Van Metropolitan ayaa sii socota. Thanks to nidaamka, muwaadiniintu waxay raaci karaan waqtiyada baska oo ay si otomaatig ah u buuxiyaan kaararka [More ...]
49 Tirada rakaabka ayaa joojinaya Antalya Gazipaşa
Si dadka looga ilaaliyo kuleylka xagaaga iyo qabowga jiilaalka ee Gazipaşa, Magaalada Antalya ee Magaalo Weynaha ayaa rakibineysa istaadinta rakaabka 9, oo ay kujirto nooca 49 magaalada. Antalya Metropolitan Dowlada hoose, gaadiidka dadweynaha [More ...]
Markii la keydiyay keydka Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka, baabi'inta Saldhigga Gürsu waxay ka careysiisay dadka Gürsu. degmada [More ...]
Ogeysiinta Musharaxiinta ee liiska dheeraadka ah ee Tababarada Tababarida
Agaasinka Guud ee TCDD TAŞIMACILIK AŞ ayaa ku dhawaaqay ku dhawaaqida musharixiinta liiska dheeriga ah ee shaqada dhismaha dhismaha. [More ...]
Ku xigeenka Giresun ayaa difaacay tareenka Trabzon ee Baarlamaanka
CHP Giresun Miletarian Bülent Yener Bektaşoğlu ayaa dhalleeceeyay baajinta joojinta tareenka Trabzon-Tirebolu-Torul inta ay dhibaatooyinka Giresun u sii wadday TGNA. Khudbadiisa, Bektaşoğlu wuxuu taabtay dhibaatooyinka shaqo la aanta, tahriibka iyo ganacsatada gobolka. [More ...]
Erdogan ayaa duulimaadkii ka dhacay Garoonka Diyaaradaha
Gegada diyaaradaha ee 3, oo la filayo inay noqoto mid ka mid ah garoomada diyaaradaha adduunka ugu weyn, 30 waxay leedahay in kabadan kun kun oo shaqaale ah oo si joogto ah u shaqeynaya iyo boqolkiiba boqol ee 80 ee dhismaha ayaa la soo gabagabeeyey. 29 waa garoonka diyaaradaha ee ugu dambeeya ee Febraayo [More ...]
Darbiga dhawaaqa la taaban karo ee ay TCDD ka dhistay inta u dhaxaysa guryaha iyo qadka tareenka ee loogu talogalay xayndaabka dhawaaqa ee ku jira baaxadda mashruuca Başkentray ee Sincan Atatürk Street wuxuu bilaabay in lagu tuuro ficil celinta. Tareenka loogu talagalay xakamaynta dhawaaqa gudaha baaxadda mashruuca Başkentray ee Sincan [More ...]
Nidaamka lagu raaco tareenka fudud ee Izmir İZBAN Magaalo Weyn ee “More Money” oo hoos imaanaysa qiimaha qunyar socodka iyo qiimaha xad dhaafka ah ee qarsoon ee ka danbeeya dhaqankan, ayaa bilaabay inuu dhaqan galo subaxnimadii maanta. Ka warqabin dalabka [More ...]
EDS ee dib loo eegay ee Istanbul
Agaasinka Guud ee Amniga ayaa sheegay in Nidaamka Baaritaanka Elektiroonigga ah (EDS) ee Magaalada Istanbul dib loo eegay laguna hawlgeliyey waxyaabo cusub. Si loo hubiyo badbaadada nolosha iyo hantida wadooyinka waaweyn, in la hubiyo socodka joogtada ah ee taraafikada [More ...]
Howlaha khadadka Haydarpaşa Gebze Suburban ayaa si xawli ah usocda: Si dib loogu furo khadadka magaalada Haydarpaşa-Gebze, oo lagu xiray 2013 ee magaalada Istanbul, shaqada khadka ayaa si xowli ku socota. [More ...]
RayHaber 15.02.2018 Warbixinta Shirka
Iibsiga Qalabka Sahaynta Dhexdhexaadka ee Dhexe ee Adeegga Shaqaalaha Cantanka Cantanka ee Gantry (TUDEMSAS) Dayactirka iyo Taageerada Nidaamyada Mashruuca EYBIS